मामाको जोडले भयो हाम्रो विवाह
जनतापाटी बिहीबार, वैशाख २६, २०७६ मा प्रकाशित
आज वैशाख २६ गते । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उनका धर्मपत्नी सीता पौडेलबीच विवाह भएको ठीक ५० वर्ष पुगेको छ । विवाहको सुनौलो वर्षगाँठको यो अवसरमा प्रचण्ड–सीता दम्पत्तिबीच पुनः सिन्दुर हालेर विवाहको कार्यक्रम आज बेलुकी ५ बजेतिर सम्पन्न हुने कार्यक्रम रहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रचण्ड र सीताबीच कसरी विवाह भएको थियो ? हिजोका कठीन भूमिगत कालहरुमा पारिवारिक गर्न केकस्ता कठिनाईहरु भोग्नु परेको थियो ? युद्धकालका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डका पत्नी सीताको भूमिका के कस्तो रहेको थियो ? लगायतका सन्दर्भमा सीता पौडेल दाहालसँगको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
उहाँ पूर्णकालीन सदस्य भएपछि बच्चाहरू हुर्काउने जिम्मा पनि तपाईंकै काँधमा बढी पर्‍यो होला, होइन ?
अहिलेसम्म जनयुद्धमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुरक्षित राख्न र नेतृत्वलाई विकास गर्न कसरी सहयोग पुर्‍याउनुभयो ?
‘जनयुद्धका नायक’ बाट
वेब सिरिजको बढ्दो क्रेज, नेपाल किन भयाे कमजाेर ? १२ मिनेट पहिले
कोसीमा हाम फालेका दाहाल बेपत्ता ३२ मिनेट पहिले
राप्रपाका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष माओवादी केन्द्रमा ३५ मिनेट पहिले
पार्टीलाई बलियो बनाउन गुटको अन्त्य गरौँ -नेता केसी
ओलीकाे दाबी- ‘चौतर्फी हमला भइरहँदा पनि हाम्रो गणना एक नम्बरमा छ’